Mbola ambetin-dresaky ny rehetra ny tsy namelana ny Cnaps Sport, hiatrika ny amboaran’ny Caf. Niniana nopotehina ity ekipa ity satria nesorin’ny federasiona an-kitsirano ny anaram-boninahiny, noho ny tsy fetezany niatrika ny lalao fihantsiana sy fampisehoana. Fihaonana izay heverin’ny rehetra fa ananan’ny ekipa roa tonta zo sy safidy, na hataony na tsy hataony, arakaraky ny fahafahan’ilay klioba.
Raha niala an-daharana tamin’ny tsy fahafahana miatrika ny amboaran’ny Caf ny Cnaps, manana ny rariny ny federasiona raha hanolo azy, saingy tsy izany no zava-misy fa niniana nosakanana ny lalan’ity ekipan’ny trano fiantohana ity. Ankoatra izay, tsy mbola misy naoty na taratasy ofisialy fampahafantarana ny Cnaps, fa tsy izy ireo no miatrika ny amboaran’ny Caf, toy izany koa ny sazy ho an’ny ligin’ Itasy, fa vaovao tamin’ny haino aman-jery no nanaovana izany. Toe-javatra tsy mbola fahita mihitsy amin’ny fitantanan-draharaha ny toy izao. Raha voasazy mantsy ny mpiasa iray na voaroaka, tokony hahazo taratasy fampahafantarana avy amin’ny mpampiasa izy. Tsy izany anefa ny an’ny federasiona. Hakanosana ve sa fialàna andraikitra? Tsy ny ekipan’ny Cnaps ihany no tratry izany kitoatoa izany fa na ireo mpanazatra ny ekipam-pirenena aza. Ongo-manta fotsiny koa ny mahazo azy ireo rehefa tsy ilain’ny federasiona intsony. Tsy mbola nisy teto amintsika izany hoe ekipa tsy manana anaram-boninahitra izany no atosika hiatrika fifaninanana afrikanina, raha tsy tamin’ity federasiona ankehitriny ity. Sombintsombiny amin’ny gaboraraka ao amin’ny federasiona ireo.
Na izany na tsy izany, fantatra fa handeha hanao lalao ara-pirahalahiana any Ihosy ny Cnaps Sport ny 15 desambra izao ka ny ekipa voafantin’io faritra io no hihaonany. Tafiditra ao anatin’ ny fitokanana ny tranon’ny Cnaps any an-toerana izany.
Zimbaboe sy Zambia
br> Efa fantatra, ankehitriny, ireo ekipa hifandona amin’ ireo solontena malagasy eo amin’ny fifaninanana afrikanina amin’ny taranja baolina kitra. Ny Gunners Fc avy any Zimbaboe, ho an’ny Tana Formation eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf. Any Zimbaboe no hatao ny lalao mandroso ny 17, 18, 19 febroary 2012 ary tapa-bolana aorian’io kosa ny fihaonana miverina etsy Mahamasina. Mifanohitra amin’izay kosa ny an’ny Japan Actuel’s eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka, izay hikatrohany amin’ny Power Dynamos-n’ i Zambia.
Source : newsmada.com -13/12/2011
364536 visiteurs - 1147012 pages vues